Te-mba ho lasa mpisolovava ao amin'ny USA. - Ny Korea In - Mpisolovava Korea an-tserasera. Koreana Mpisolovava, ny lehibe indrindra ara-dalàna ny vavahadin-tserasera.
Te-mba ho lasa mpisolovava ao amin'ny USA. - Ny Korea In
Kwon: nianatra simika injeniera ao amin'ny oniversite
Nanomboka tamin'ny krizy ara-bola erantany tamin'ny, sekoly fianarana lalàna grads dia nahita henjana mba hahazo asa maha-mpisolovava ny efa fifaninanana USA tsenan'ny asaChae Yoon ny Baker McKenzie LLP, Vivian Choi ny Shearman Sterling LLP, Sam Kwon ny Kirkland Ellis LLP sy Yu Jeong-seok amin'ny Simpson Thacher Bartlett LLP hizara zavatra maro iraisana.
Ilay tanora mpisolovava ao amin'ny faramparan'ny taona mahery kely, na tany am-piandohan'ny taona na taona ny manam-pahaizana avy any ambony ny lalàna ny sekoly any ETAZONIA, lehibe kokoa noho ny firenena iray sy mandroso ny fifandraisana fahaiza-manao izay hanampy azy ireo mba hiasa ao amin'ny iraisam-pirenena ny tontolo iainana.
Chae, Choi sy Kwon nihaona nandritra ny vanin-taona mafana internship fandaharana amin'ny mpitarika koreana lalàna hentitra, ary Yu haiko Chae sy Kwon amin'ny alalan'i Choi. Ny taona faharoa amin'ny ny lalàna orinasa toy ny mpiara-miasa, dia nizara Ny Korea Fotoana izay dia naka azy ireo izy mba hanomboka ny asa eo amin'ny lalàna ao ETAZONIA sy ny inona ny amin'ny fiainany amin'ny maha-mpisolovava azy dia toy ny. A: Choi: nihalehibe aho amin'ny nofy ho lasa diplaomaty fifampiraharahana fifanarahana sy ny fifanekena ho an'ny Korea. Nianatra momba ny fifandraisana iraisam-pirenena ao amin'ny oniversite sy ny sekoly ambony, ary nanomboka tamin'ny koreana minisitry ny raharaham-bahiny sy ny Tontolo ara-Barotra ny Fikambanana. Nandritra izany dia tonga saina aho fa ny fananana ara-dalàna fototra ho zava-dehibe ho inona aho, te hanao izany. Na inona na inona ny politika te-vokatry ny alalan 'ny governemanta na ny miova isika dia te-mahita eo amin'ny fiaraha-monina, ny ankamaroan' izany dia manomboka amin'ny fifampiraharahana ara-dalàna ny antontan-taratasy, ary dia ampiharina bebe kokoa ao anatin'ny sehatry ny lalàna. Kwon: amin'ny Maha-mpianatra ho injeniera ao amin'ny oniversite, tsy mihevitra ny lalàna ho toy ny asa safidy aho mandra-nanatrika seminera hiresahana ny patent lalàna sy patent mpisolovava ao ny zandriny taona. Hitako ny interface tsara ny ny siansa sy ny lalàna mba ho tena manintona, ary dia nanomboka hiomana amin'ny sekoly fianarana lalàna fieken-keloka izany taona izany. F: Inona ny torohevitra tianao homena ireo olona izay manomana lalàna sekoly, ary ho an ireo izay miditra ao amin'ny sekoly fianarana lalàna. A: Chae: mba tiako ny manoro hevitra azy ireo ho voalohany mamaritra raha tena te-handeha ho any amin'ny sekoly fianarana lalàna. D. fandaharana ao amin'ny USA maka telo taona feno, ary mety ho tena ara-bola ny enta-mavesatra. Toy izany fanoloran-tena tokony tsy ho raisina ho afa-maina, indrindra amin'ny fomba fijery ny amin'izao fotoana izao ny fifaninanana tsena ara-dalàna.
Raha ny lalàna momba ny fampiharana an-tsekoly, izaho no milaza ny mpangataka ny LSAT (Sekoly fianarana Lalàna fieken-keloka Fitsapana) isa sy ny GPA dia angamba roa manan-danja indrindra ny anton-javatra.
Fa ny lalàna sekoly handray maro ny lafin-javatra hafa ho fiheverana, toy ny mpangataka ny fanambarana manokana, ny fiaraha-monina asa fanompoana sy ny taratasy fiderana. Choi: te-hiteny aho tsy misy maika ny miezaka mba hanomboka ny sekoly fianarana lalàna haingana araka izay azo atao. Faly aho fa izaho no nanao ny fianarana ambony sy ny fiofanana ho amin'ny vao hahalala raha mba handeha lalàna ny sekoly dia ny marina ny dingana.
Manoro hevitra aho ny mpianatra avy amin'ny oniversite androany mba haka bebe kokoa noho ny loza mety hitranga nataoko sy hijery ny zavatra avy any raha tanora ianao ho anisan'ny iray start-up, mipetraka any amin'ny firenena hafa, miezaka ny fiofanana.
A: Chae: fahaiza-Manoratra dia zava-dehibe indrindra
Yu: Ny tontolo niova ny tena kely, sy ny tsena ara-dalàna dia lasa somary tototry, indrindra taorian'ny krizy ara-bola. Maro ny olona no voalohany voasariky ny orinasa lalàna noho ny liana eo amin'ny raharaham-barotra, fa tsy mba hitondra ho fiheverana fa ny ampahany ny orinasa ara-dalàna ny asa matetika tafiditra miara-miasa akaiky amin'ny lava, orinasa goavana ny fifanarahana sy mandritra ny ora maro miasa ao amin'ny ekipa. Manoro hevitra aho fa ny olona izay mandinika ny lalàna sekoly miresaka amin'ny isan-karazany ny lalàna sekoly nahazo diplaoma amin'ny isan-karazany ny asa, ary mianatra momba ny zavatra ny day-to-day fiainan ireo mpahay lalàna dia toy ny. Ny fikarohana sy ny fisainana dingana izany dia zava-dehibe ihany koa eo amin'ny fanomanana ho amin'ny sekoly fianarana lalàna. Izany no mora ny mahazo tratra tao ny tadio ny sahirana lalàna ny kilasin'ny sekoly sy ny fitadiavana vanin-taona mafana internships, ary hanaraka ny vahoaka eo amin'ny lafiny inona indrindra ny mpiara-mianatra dia nanenjika. A: Choi: mieritreritra aho fa ny oniversite dia ny fotoana mba hijery hoe iza ianao sy ny fomba ianao dia afaka ho fandraisana anjara amin'ny fiaraha-monina, ary koa ny fotoana mba hanadihady ho filozofika fanontaniana sy hianatra vita an-tsoratra sy ny zavakanto tantara, ho amin'ny fahafinaretana fotsiny izany.
Afa-tsy, na inona na inona no tena hanomana anareo ho an'ny taona voalohany amin'ny sekoly fianarana lalàna.
Andrasana goavana ny kolontsaina taitra mandeha avy amin'ny injeniera ny lalàna am-pianarana, fa tsy nahita ny injeniera sy ny lalàna mba ho mahagaga toy izany koa ao fa samy mitaky fitsipika hentitra fandalinana fisainana. Amin'ny azo ampiharina bebe kokoa ny sehatra, toy ny patent litigator, dia miatrika ny sarotra ara-tsiansa sy ny foto-kevitra isan-andro, sy ny injeniera ny fanabeazana efa lehibe hanampy amin'ny malawita ireo foto-kevitra. Mahatsapa aho fa ho afaka hanoratra mampivondrona sy fohy tohan-kevitra no tena zava-dehibe ho an'ny mpisolovava. Soa ihany fa tsy, izany dia afaka ny ho nifantoka indrindra amin'ny alalan'ny fanao, ary raha mbola manana be dia be ny hianatra, ny fanoratana no tena nihatsara satria manatrika ny sekoly fianarana lalàna.
Koa, rehefa lehibe mpanoro hevitra ao amin'ny Baker McKenzie efa nanampy ahy be.
Choi: nahita aho fa manana fifandraisana, fikambanana sy ny fitantanana ny fahaiza-manao dia tena zava-dehibe. Sarotra ny hijanona patrana toy ny lalàna mafy mpiara-miasa raha tsy misy ireo fahaiza-manao. Ny ampahany lehibe amin'ny maha-mpisolovava ny orinasa, dia ny fitantanana ny raharaham-barotra dingana. Vao mahazo kokoa ny fifanarahana manampy traikefa amin'ny fitantanana ny fahaiza-manao satria ianao hahazo tsara kokoa mialoha sahady dingana sy manomboka ny mahita ny fomba isan-tapa-ny raharaham-barotra mety miara. Kwon: Satria patent ny lalàna dia mitaky ny fifandraisana sarotra ara-tsiansa ny hevitra sy ny ara-dalàna sy ny fitsipika tsara ao amin'ny soratra sy ny fandalinana ny fandresen-dahatra no zava-dehibe.
Ny fomba tsara indrindra mba hanatsarana ireo fahaiza-manao dia mba manao araka izay azo atao.
Ao amin'ny sekoly fianarana lalàna, dia niezaka ny haka tahaka ny maro fanoratana ny fampianarana araka izay azo atao, ary ankehitriny, izaho mavitrika mitady asa izay mitaky ny fampiasana ireo fahaiza-manao. Yu: Eo an-tampony ireo fahaiza-manao, ianao koa dia mila fahaiza-mitarika. Ny mpanjifa miantehitra anao amin'ny isan-karazany ny fandraisan'izy ireo anjara na multidisciplinary olana. Mila synthesize ny valinteny avy amin'ny mpikambana ao amin'ny ekipa avy amin'ny faritra samihafa ny fahaizany, ary avy eo dia manome ny heviny valiny izay mifanaraka amin'ny mpanjifa' zavatra ilaina. Manana ny fahaiza-manao mba synthesize cogent sy azo ampiharina vahaolana mifototra amin'ny tsy feno ny vaovao dia ampahany manan-danja ny asa. Q: Rehefa nahazo diplaoma tany amin'ny sekoly fianarana lalàna, izay karazana ny asa afaka miditra ao. Nahoana ianao no misafidy izay miasa ao amin'ny lalàna mafy.
A: Choi: izaho dia nisafidy ny hiasa amin'ny lalàna hentitra amin'ny toro-hevitra aho fa handray ny tsara indrindra ara-dalàna ny fanofanana azoko tsara avy amin'ny sekoly fianarana lalàna.
Efa maro ny mpiara-miasa sy mpiara-miasa, izay hanara-maso sy hijery ny asa amin'ny fotoana rehetra. Ankoatra izany, amin'ny alalan'ny fandraisana anjara amin'ny fifanarahana ny ekipa, dia tsy mahazo mahita ny-akaiky ny zokiny mpiara-miasa sy mpiara-miombon'antoka amin'ny asa sy ny hianatra avy aminy. Fanamarihana ihany koa eo amin'ny samy ao anatin'ny lalàna mafy sy avy amin'ny mpanjifa, ary dia matetika no hafa ny raharaham-barotra ka manaraka ny hanome anareo ny fahafahana hampihatra ny zavatra rehetra nianaranao omaly. Yu: Lalàna, filazam-pahaizana sy ny traikefa eo amin'ny lehibe ny lalàna mafy ao New York dia hanampy anao hanana ny hametraka ny fahaiza-manao izay azo ampiharina amin'ny ny isan-karazany ny saha. Maro ny mpisolovava iza no handao ny orinasa lalàna rehefa afaka taona vitsivitsy hanararaotra ny fiofanana sy handray lehibe, manan-danja toerana ambony ao amin'ny governemanta, ny fitantanam-bola, ny orinasa lehibe na amin'ny start-dehibe. A: Chae: izaho fahazoan-dalana any Texas Nanomboka ny asa ao amin'ny Dallas noho ny be dia be ny fahafahana fanokafana ny zanabolana Etazonia Patent sy ny Famantarana ny Birao, eo anatrehan'ny mafy ny sehatry ny teknolojia sy ny fanta-daza manana fifandraisana amin'ny Distrika Atsinanana any Texas, izay mbola malaza indrindra toerana rakitra patent fitoriana any ETAZONIA Yu: New York. Miampita sisintany varotra dia ao anatin ny mofo sy dibera New York lalàna orinasa amin'ny ankapobeny, noho izany dia voajanahary safidy mba hitady mafy any New York toy izany toy Simpson Thacher hatramin'ny voalohany.
A: Choi: izaho no amin'izao fotoana izao ao amin'ny orinasa group.
Shearman Sterling ny New York, ny birao dia manana roa taona orinasa dobo fandaharana izay zandriny mpisolo vava mandray andraikitra avy amin'ny orinasa isan-karazany ny vondrona M A, fitantanam-bola, ny tsena renivohitra ny anarana vitsivitsy. Vokatr'izany, dia mety ho miara-miasa amin'ny efatra na dimy samy hafa tanteraka ny raharaha andavanandro. Yu: izaho no miasa amin'izao fotoana izao ao amin'ny mafy ny orinasa, ny departemantan'ny. Efa tafiditra ao amin'ny maro ny fiombonana, acquisitions, pananana ara-mampisambotra, unsecured mampisambotra sy ny vahoaka ny fanatitra isan-karazany trosa sy ny hitsiny fitaovana. A: Choi: Rehefa miara-miasa amin'ny mpiara-miasa aminy sy ny mpanjifa manerana izao tontolo izao, mino aho fa ny tena zava-dehibe ny manana misokatra an-tsaina, mba ho fantatsika ny fomba ny asa dia mety azo raisina amin'ny fomba hafa eo amin'ny kolontsaina hafa, ary hahatakatra ny fomba hafa mety ihany koa ny hijery ny zavatra hafa avy aminao. Yu: Fiteny ny fahaiza-manao dia tena plus ihany koa A: Choi: Ny zavatra tsara indrindra momba ny asa ho ahy no hataoko fa mba hianatra zava-baovao isan-andro. Fa ny lafiny hafa indray: izany no ny adin-tsaina ny juggling maro samy hafa ny laharam-pahamehana mandritra izany fotoana izany. Aho hanao ny fotoana miezaka ny mihinana ny sakafo miaraka amin'ny vadiko isaky ny afaka na mahazo ny kafe miaraka eny an-dalana any amin'ny birao ny maraina, na ny fihaonana teo anoloan'ny biraon'ny nandritra ny minitra hariva, ary avy eo dia miverina miasa. Yu: didy amam-pitsipika tontolo sy ny raharaham-barotra, ny endriky ny fiovana haingana, ary tena ilaina ho tafiditra ao daholo ny fanazavana avy-misy mba hitari-dalana mpanjifa. Dia mahagaga fa tsara ny mitandrina abreast ny amin'izao fotoana izao, ny olana amin'ny alalan'ny famakiana ny gazety ary gazetiboky. Fanamby iray hafa ny asa dia ny sarotra ny lafiny miasa miaraka amin'ny maro ny mpanara-maso tamin'ny efaha amin'ny isan-karazany, izay matetika mifindra unpredictably. Misy ihany koa ny zavatra azonao atao ny momba izany, nefa miezaka aho mba ho tompon'andraikitra voalohany amin'ny fametrahana ny fandaminana ny rafi-terỳ am-piandohana noho izany dia mora kokoa ho ahy taty aoriana, ary koa ny mijery tsy tapaka amin'ny ireo izay mitantana ahy.
Tanteraka Ny Fandoavam-Bola Amin'ny Fanarenana Ny Asa
Pa singer di Corta Uso saminá e inskudriñabel un rèfri di e teritorio un arbitrahe di versión Geval di Arbitrahe den Notisia